Fanondranana entana : manohana ny PME ny AFD | NewsMada
Fanondranana entana : manohana ny PME ny AFD
Havondrona ao anatin’ny antokon-draharaha iray, ny sehatra sahanin’ny Cap export sy ny ITBM, rafitra manohana ny varotra ivelany indrindra ny fanondranana entana any ivelany ho an’ny orinasa madinika sy salantsalany, tohanan’ny AFD.
Tafiditra ao anatin’ny sehatra tohanan’ny Antokon-draharaha frantsay ho an’ny fampandrosoana (AFD) ny fampiroboroboana ny varotra ivelany. Anisan’izany ny fanofanana arakasa, ny fanamafisana ny fahaiza-manao eny amin’ny seranan-tsambo. Manampy ireo, vonona hanohana ny fanondranana entana any ivelany koa ny AFD, ka hamoraina ny fanatanterahana azy. Tohanana koa ny orinasa madinika sy salantsalany (PME), misehatra amin’ny varotra ivelany. Nihaona tamin’ny minisitry ny Varotra sy ny fanjifana, Nourdine Chabani, ny talen’ny AFD, Jérôme Bertrand-Hardy, ny 11 septambra teo, niresahana mikasika ireo.
Fomba hanatanterahana io tohana io ny hananganana antokon-draharaha iray ahitana ny seha-pihariana samihafa, tohanan’ny AFD. Anisan’izany ny Cap export, tetikasa iarahana amin’ny Antenimieran’ny varotra sy ny indostria Frantsa-Madagasikara, manohana ny PME mpanondrana entana, sy ny sampandraharaha misahana ny fampiroboroboana ny varotra ivelany eto Madagasikara (ITBM). Hofanina ny orinasa madinika sy salantsalany, entanina ny vondrona orinasa ahafahan’izy ireo ho fitaratra ho an’ny hafa. Hakambana ao anatin’ity antokon-draharaha iray vaovao ity ny asan’ny Cap export sy ny ITBM, ary manodidina ny 4 tapitrisa euros ny famatsiam-bola avy amin’ny AFD hampandehanana azy.
Tsiahivina fa anisan’ny tohanan’ny AFD koa ny sehatry ny fambolena biolojika, amin’ny alalan’ny Symabio sy ny hananganana ny antokon-draharaha Apex.